Ilay sambo lehibe indrindra natao Batemy any Seattle: fahasambarana norveziana
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Ilay sambo lehibe indrindra natao Batemy any Seattle: fahasambarana norveziana
Enga anie 31, 2018
Taorian'ny fitsidihan'ny fampisehoana nijanona iray volana Etazonia anisan'izany ny topi-maso ao New York, Miami ary Los Angeles, Ny sambo Norveziana Cruise Line izay nandrasan'ny besinimaro, Norvezy Bliss, dia natao Batemy tamin'ny fomba ofisialy androany tao an-tranony fahavaratra Seattle. Taorian'ny topi-maso mialoha Enga anie 30 - Jona 2, Norvezy Bliss, sambo fahatelo amin'ny kilasy nahomby indrindra tamin'ny tantaran'ny tsipika, dia hanomboka ny vanim-potoanan'ny fahavaratra voalohany amin'ny fitsangantsanganana mankany Alaska anisan'izany ny antso ao Ketchikan, Skagway, Juneau ary Victoria, British Colombia manomboka Jona 2. Hanatevin-daharana ny Jewel Norvezy sy ny Voahangy Norvezy izy ho toy ny fiaramanidina tanora indrindra hatreto Alaska.
Ny Bliss norveziana dia noraisina tamina tranony fahavaratra tamina fiarahabana avy amin'ny rano-canona avo avy any an-danitra Seattle Sampana mpamono afo, rehefa niondrana an-tsambo nankany Port of Seattle. Ny terminal Bell Street Cruise Terminal vao nohavaozina sy nitarina vao haingana tao amin'ny Pier 66, fampiasam-bolam-panjakana tsy miankina eo anelanelan'ny Cruise Line Holdings sy ny Port of Seattle, nahazo ny sambo 168,000 4,004-taonina manana tanjaka 300, olona roa heny, vao maraina teo. Ny fantsona nohatsaraina dia misy in-telo ny sary toradroa, mampitombo ny fahaizan'ny fampiasana XNUMX isan-jato, efitrano fandraisam-bahiny natokana ho an'ny vahiny vahiny sy singa miatrika vahiny misimisy manome traikefa an-tsambo, ahazoana aina sy tsara tarehy eny amoron-dranomasina.
Nidina an-tsambo avy any amin'ny Port of Seattlenandritra ny valo ambin'ny folo taona, ary ny fampiasam-bolam-panjakana-tsy miankina izay nahatonga ny fanatsarana ny Terminal Bell Street Cruise tao amin'ny Pier 66 azo atao, dia maneho ny fahavononantsika amin'ny tanànan'i Seattle, "Hoy izy Frank Del Rio, filoha sady lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny Norvezy Cruise Line Holdings. “Amin'ity volana ity, mankalaza efatra amby roapolo taona fitsangantsanganana an-tsambo i Norvezy Alaska, ary miaraka amin'ny Bliss norvezy niditra tao amin'ny Alaska fiaramanidina no hananantsika ny fahaizany lehibe indrindra amin'ny tantarantsika, ka hanome safidy bebe kokoa ho an'ny vahiny hiaina ny halehiben'io toerana io. ”
“Ny seranan'i Seattle faly erỳ mandray ny Bliss norvezianina mahafinaritra sy ny mpandeha ho an'ny maro Alaska vanim-potoana fitsangantsanganana ho avy, "hoy i Port of Seattle Filohan'ny komisiona Courtney Gregoire. “Ny sambo fitsangantsanganana an-dranomasina toa ny Norvezy Bliss dia mahafeno ny tanjonay amin'ny fampitomboana ny fahafaha-manao tombony ara-toekarena eto amin'ny faritra misy antsika ary manandratra hatrany hatrany ny fitohizan'ny tontolo iainana. Misaotra ny norveziana izahay nandritra ny valo taona niarahan'izy ireo niasa tamin'ny Port of Seattle, ary manantena ny ho avy maro hafa. ”
Tao anaty sambo no natao ny lanonana fanaovana Batisa, ho an'ny norveziana iray hafa aloha. Ny hetsika nokarakaraina tamim-pitandremana dia porofon'ny fahatokisan'ny orinasa fialamboly. Notarihin'ilay raikely, Elvis Duran ary ny mpiasa maraina The Show Show, olona manodidina ny 2,400 no nanatrika ny lanonana fanaovan-jaza satria nalefa manerana ny sambo, ka nahatonga azy io ho traikefa iraisan'ny rehetra ao anaty sambo. Ny hetsika lehibe dia natao tao amin'ny Theatre Bliss 900-seza miaraka amina fivoaran'ny satelita ao Q - ilay Texas Smokehouse voalohany, ilay Observation Lounge 20,000 metatra toradroa izay manome fomba fijery 180 degre, ny Atrium ary ireo toerana hafa manerana.
Frank Del Rio ary Andy Stuart, filoha sy talen'ny birao mpitantana ny Cruise Line Norveziana, niarahaba ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany, mpampiasa vola ary solontenan'ny indostria ao amin'ny Bliss Norvezy, ary niresaka ny hatsaran'ny sambo, ny fientanam-pon'ny fitsidihana an-tsokosoko mahatalanjona, ny indostria mitarika kojakoja feno fankasitrahana sy ny fisaorana an'ireo rehetra. ireo izay miantoka traikefa nahafinaritra tsy hay hadinoina tao amin'ny Bliss Norvezy. Ny vahiny manokana dia ny governoran'i Alaska Bill Walker sy ireo tompon'andraikitra eo an-toerana avy any Seattle. Nanatrika teo ihany koa ny mpanakanto fiainana an-dranomasina fanta-daza Wyland, izay nandoko ny vatan'ny Bliss Norvezy ny rindrina lehibe kokoa noho ny fiainana ary mijoro ho fampahatsiahivana manentana ny voninahitr'i Alaska ary ny maha-zava-dehibe ny fitehirizana ny ranomasin'izao tontolo izao.
"Amin'ny maha-sambo lehibe indrindra natao batisa Seattle, Ny lanonana Norveziana Bliss no tena nahafinaritra anay, ”hoy izy Andy Stuart, filoha sady lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny Cruise Line Norveziana. "Misaotra ny Emerald City izahay noho ny fandraisana azy ireo sy ny fiarahan'izy ireo, ary manantena ny hanohy sy hanamafy ny fifandraisanay amin'ny Port of Seattle mandritra ny taona maro. ”
Taorian'ny tsodrano nentim-paharazana, Andriamatoa manan-kaja, Elvis Duran, nanao Batisa tamin'ny fomba ofisialy Bliss Norveziana tamin'ny famakiana tavoahangy an'ohatra namakivaky ny vatamaso sambo, maniry fitsangatsanganana soa aman-tsara ho an'ny vahiny sy ny ekipa rehetra na aiza na aiza toerana misy azy, ary hanomboka takariva feno fahagagana mampiato.